Fampianarana - Page 2 sur 2 - Lalamasaka Hatry ny Ela
Accueil - Fampianarana - Page 2
Fitsipika lehibe tokony harahina mialohan’ny hampianarana ny Tenin’Andriamanitra
Ny hoe : AMPITAHAO amin’ny SORATRA MASINA ny Soratra Masina dia izao, izy izany no fitsipika lehibe indrindra. 1 — Ampitahao ary ny Soratra Masina rehetra mikasika ny lohateny iray itovizana. AZA MANANGANA foto-pampianarana avy amin’ny andininy iray na roa, kanefa tsy noraisinao avokoa ny andininy rehetra mikasika io lohateny iraisana io. 2 — JEREO, inona no antony nanoratan’ilay mpanoratra ny anjarany...
par MA Daoud · Published 24 septembre 2019 · Last modified 3 décembre 2019
Ahoana no hiofanana ho amin’ny asan’Andriamanitra
Na iza na iza no maniry hiofana ho amin’ ny asan’ ny Tompo dia tokony hahatsapa fa ny fiainana anatiny manokana eo anatre­han’ Andriamanitra no fanoitra fototra ho amin’ ny fahombiazana sy fisondrotana ara-panahy. Liana kokoa Andriamanitra mijery ny fiainana iainantsika sy ny eritreritra sainintsika, ny fahamasi­nam-po sy fampiharana ny fahamarinana, raha atao indraim-bava, ny fiovantsika amin’ ny alalan’ ny Fanahy hitovy endrika...
par MA Daoud · Published 17 septembre 2019 · Last modified 3 décembre 2019
Mba nozahanao ve ny bokin’ ny fiainam-panahinao ? Moa voalaminao ara-dalàna ve ny kaontinao amin’ ny Tompo ? Aiza ny voady Izay nataonao ny voalohan’ ny volana janoary ary ny faharoan’ ny volana janoary 1966 ? Nanokana fotoana vitsivitsy tao amin’ ny miafina ianao tamin’ izany fo­toana Izany hivavahana sy hangatahana amin’ Andriamanitra hoe : « Satria efa novonjenao aho, dia...